Madaxwaynaha DDS Itoobiya Iyo Hogaamiyaha Jubbaland Oo Ku Kulmay Nairobi – Marqaanmedia24.com
February 13, 2018 maqal iyo muuqaal, wararka 5
Madaxweynaha jubbaland Axmed Madoobe oo Muqdisho uga qeyb galay shirka Golaha Amniga Qaranka ayaa wada hadalo uu la yeeshay qaar ka mid ah Hogaamiyeyaasha dalka u ambabaxay Nairobi.
Daawo Muuqaal Yaab Leh Ciidankii KHaatumo oo Lagu Daray Somaliland (Video+Warbixin)
Maxaad u Tiri Hogaamiyaha Jubalaan, kan kale ee aan amar iyo nahyi toona laheyn aad Madaxweyne ugu tilmaantey. ujedadaada lama garan karo isa sax.
Maxaad u Tiri Hogaamiyaha Jubalaan, kan kale ee aan amar iyo nahyi toona laheyn aad Madaxweyne ugu tilmaantey. ujedadaada lama garan karo isa sax. Wax edeb darran ayaad tahey Xayawaan.
Qofka fulaygaa waxaa lagu yaqaan qofkuu wax ka sheegayo ma sheego magaciisa.Qofka maanta wata magaca Axmad yaad u jawaabtay oo ad u soo dirtay qoraalada kor ka muuqda?Masee adigaa isla hadlaya?Tan kale haddii ad tahay Axmadkii reer waqooyi kuguma aqoon saad maanta u caytantay ee haddii ad adigii tahay maAnta miyay kugu KACSAN TAHAY?
Waxaa wanaagsanaan lahayd in layiraahdo
Madaxweynaha Dowlad deegaanka Soomaalida KENYA iyo Madaxweynaha Dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya